Xog: Qodobada laga filayo shirka madaxda maamul goboleedyada ee Garowe - Caasimada Online
Home Warar Xog: Qodobada laga filayo shirka madaxda maamul goboleedyada ee Garowe
Xog: Qodobada laga filayo shirka madaxda maamul goboleedyada ee Garowe
Garoowe (Caasimadda Online) – Golaha Iskaashiga dowlad Goboleedyada ayaa lagu wadaa in todobaadkan uu shir uga furmo magaalada Garowe, kaasoo ahaa mid horay loo qorsheeyay.
Kulanka Maamul Goboleedyada uga furmi doono Magaalada Garoowe ayaa la filayaa inay kasoo bixi doonaan qodobo sii kala fogeyn doono Dowladda Dhexe iyo Maamul Goboleedyada.
Shirkii Kismaayo ay ku yeesheen ayey kaga dhawaaqeen inay xiriirka u jareyn Dowladda Dhexe waxayna taas keentay inay istaagaan dhammaan shaqooyinkii Dowladda Dhexe kala dhaxeeyey Maamul Goboleedyada oo ay ugu horeeyeen Shirkii Amniga Qarank iyo Arrinta Dastuurka.
Sida ay Caasimadda Online u xaqiijiyeen xubno aad ugu dhow Maamul Goboleedyada, Shirkaan ayaa la filayaa in laga soo saaro qodobo xaasaasi ah oo ay kamid tahay inaysan Dowladda iyo iyaga dib dambe u macaamili doonin ayna ka madax banaan yihiin taasna ay keeni doonto inay Soomaaliya gasho xaalad siyaasadeed oo aad u cakiran.
Sidoo kale waxaa kamid ah qodobada shirkaan looga hadlayo in dib loo dhigo dhammaan doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan Maamul Goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Puntland isla markaasna aysan wax talo ah ku yeelan Dowladda Dhexe.
Beesha Caalamka ayaa ku guuldareystay inay joojiso kulankaan Maamul Goboleedyada uga furmayo Garoowe waxaana muuqato inay si weyn usii kala fogaanayaan Maamulada iyo Dowladda Dhexe.